Ukuqonda inkcaso kwiikhamera eziLwelwe ngumzimba ngabasebenzi | Izisombululo ze-OMG
Iikhamera kufuneka zikhokelele ekunciphiseni kobundlobongela obenziwa ngamapolisa. Abagxeki boyika okuchasene noko. Ingxaki lulawulo olukubanye.
Ngaba ufanele ukuhamba lonke ixesha?
Iicams zomzimba kukutya kwamtsha kwamapolisa. Imanyano enye emva kwesinye ngoku isisiseko esisemthethweni sokusetyenziswa kweekhamera ezincinci egxalabeni okanye kwisingxobo sesifuba samapolisa. Ukuza kuthi ga ngoku, amapolisa ikakhulu alungele ukwenziwa kwezinto ezintsha. Nokuba ngaba oko kuzisa izibonelelo ezivela kumbono womthetho waseburhulumenteni kuxhomekeke ngokupheleleyo kuyilo.
Ngekhamera enobuchwepheshe obuphezulu obekwe egxalabeni lamapolisa, indlela yokuziphatha kwabameli iya kubekwa esweni.
Inqanaba, linye, lokuqinisekisa ukuba isenzo esifanelekileyo samapolisa, ngokwemigaqo, kunye nesibini, ukuthintela izenzo zenkohlakalo, kunye nenani lesithathu, ngokuchanekileyo nokuba nobungqina xa bekhalaza ngentshukumo yamapolisa.
Amapolisa akholelwa ekubeni ukurekhoda ulawulo oluphikisanayo kunciphisa ubundlobongela kumagosa asebupoliseni. Abagxeki bakrokrela okuchasene noko. Iilokhwe zihlala zinxila kwaye zinokuziva zitshutshiswa kukusetyenziswa kweekhamera. Zombini izandi ezivakalayo. Ngokufanelekileyo, amapolisa aya kuba ngabokuqala ukunika ingxelo ukuba imizimba yeenkomo iyangqinelana kwaye ibeka emngciphekweni impilo yamagosa.
Ingxaki yesibini kukurekhodwa okubizwa kwangaphambili. Ukuze isebenze ikhamera kunye nomzuzu odlulileyo iyafumaneka-eluncedo ekuqondeni imeko-, ikhamera kufuneka ihlale isebenza. Ukukhusela idatha kuyibona njengokugcinwa kwedatha entsha. Isigama sibonakala siphezulu kakhulu. Ekugcinweni kwedatha yefowuni, indlela yokuziphatha kwabantu bonke kwiiveki ezintandathu irekhodiwe. Apha, kwelinye icala, imalunga nokurekhodwa kokugcina imifanekiso kunye nesandi semizuzwana nje ye-60 - kwaye oku kwimeko apho amapolisa engenzi ngokufihlakeleyo kodwa ngokungafihlisi.
Eyona ngxaki yingxaki yolawulo olucekeceke lwee-Cams zomzimba. Kuba lipolisa kuphela elithatha isigqibo sokuba indawo egcinwe isigxina isigxina. Kwaye unokucima ikhamera nangaliphi na ixesha. Uvavanyo lokurekhodwa kwenziwa ngamapolisa. Ke ngoko, inkxalabo iyacaca ukuba i-Body-cam kuphela ubundlobongela babemi ibhaliwe, kodwa hayi ubugwenxa bamapolisa. I-Cam yomzimba emva koko ayizonjongo, kodwa ziyindlela enokubakho yokujonga.
Uphando olwenziwe yiDyunivesithi yaseCambridge yeza neziphumo ezihle: xa amapolisa enokuguqula umzimba we-Body-cam kwaye ucime, ukusetyenziswa kwamandla ngamapolisa kwandiswe ngepesenti ye-73. Ngokwahlukileyo, ukuba ikhamera ihambe kulo lonke ixesha lokutshintsha, ukusetyenziswa kwamandla kuye kwehla ipesenti ye-36. Ukusuka ngokwenyani kubonakala kunokwenzeka kuphela ukuba iirekhodi zomzimba-cam zibuthathaka ngokupheleleyo. Oku kufuneka kuxoxwe kwakhona kunye negosa lokukhusela idatha. Kwaye amapolisa angabonisa okwangoku ukuba ngaba konke malunga nokukhuselwa kwamagosa asebupoliseni okanye impilo-ntle yabo bonke ababandakanyekayo.
"Itekhnoloji le iyafumaneka ukuze uninzi lwamasebe aseburhulumente kunye nelizwe kufuneka babe neekhamera zomzimba, babe nevidiyo ngokwembono yamagosa ethu, babone ukuba bazama ntoni,"
Amapolisa kufuneka, ngaphambi kokusebenzisa nokuqokelela ezi rekhodi, aqikelele ukuba aza kuziqokelela nini, zeziphi iimeko aya kuzenza, zeziphi iimeko avunyelwe ukuba azenze, aza kwenza ntoni ngoku, njani kwaye nini kwaye njani itshatyalalisiwe.
Ukusetyenziswa kweekhamera zomzimba kuthetha ukurekhodwa kwenani lezinto ezibonakalayo zomsindo obonakalayo kubandakanya ukuhlangana nabantu abaziwayo. Kolu ngenelelo, igama, ubuhlanga, ubuhlanga, umbala okanye ubudala bomntu zinokurekhodwa. Ukurekhodwa, ukongeza kwitekhnoloji entsha yokuhlaziywa kwevidiyo kunye nokuqwalaselwa kobuso, vumela ukunyanzeliswa komthetho ukufezekisa inqanaba elingenakulinganiswa lokuchongwa komntu. Nalo naluphi na ulwazi ngokubhekisele “kumntu othile onokuchazwa” lujongwa njengolwazi lomntu buqu ngaphakathi kwintsingiselo yomthetho woKhuseleko loLwazi lwaBucala kunye noMthetho wamaXwebhu oMbane (PIPEDA)
Icandelo 7 le-PIPEDA libonelela ukuba "ulwazi lomntu alunakuqokelelwa ngaphandle kolwazi nemvume yomntu lowo", ngaphandle kokuba, phakathi kwezinye izinto, "ingqokelela isengqiqweni ngeenjongo ezinxulumene nophando lokophula isivumelwano okanye ukophula umthetho umthetho wobumbano okanye wephondo. Nangona kunjalo, nakuphi na ukoyikisa kwabantu ngamapolisa akuchaphazeli. Ngegama lentlonipho kunye nokugcinwa kwemfihlo yolwazi lwethu lomntu, ukusetyenziswa kweekhamera zomzimba akunako, ke ngoko, ukukhutshwa kwisakhelo somthetho. Ukusetyenziswa simahla kwale teknoloji kuya kuthoba intsingiselo yoluvo lokuba ngasese.
Umngcipheko wokuhlasela ubumfihlo awupheli apho. Abasemagunyeni bebengayi kugcina nje kuphela ukuba ungubani na kodwa kwanento oyithethayo. Ngapha koko, akukho nto inokuthintela iikhamera zomzimba ekurekhodeni ulwazi kubantu abadlula ngendlela ngaphandle kolwazi lwabo. Le teknoloji kuya kufuneka ingene kakuhle kuluntu lwethu ukuze ingaphule umthetho wabucala.
Ngendlela efanayo, kuyathakazelisa ukuqaphela ukuba imiba yeekhamera ijongene nemibono ekwabelwana ngayo ngaphakathi. Ukongeza kwimiba yezomthetho, ukwamkelwa kweekhamera zomzimba kuya kubonisa utyalo-mali olubalulekileyo lwexesha kunye nezixhobo kwiiyunithi ezichaphazelekayo.
Imiceli mngeni kukuqokelela iinkcazo zamangqina kunye namaxhoba. Sifumanise ukuba abantu bayathandabuza ukunikela ubungqina njengamangqina kuba bayazi ukuba bavotile. Abanye abantu bayala ngamandla ukurekhodwa. Abanye bazama ukufihla imbonakalo yekhamera. Iikhamera kufuneka zenziwe ngesandla ngumceli mngeni ngokwawo. Kuba… amagosa angazange abenabo, kuya kufuneka afunde ukuba asebenza njani kwaye ayikhumbule indlela yokwenza kwimeko ebekiweyo yoxinzelelo. Uphando lubonisa ukuba amagosa afuna ngaphezulu okanye ngaphezulu kwesiqingatha sonyaka ukuze isenzo sokukhanyisa ikhamera sibe sendalo.
Ukuqonda ukuchasana kweKhamera eziLwelwe ngumzimba ngabasebenzi gqibela ukuguqulwa: Disemba 2nd, 2019 by admin
3014 Ubutyebi Bonke Imibukiso ye-10 Namhlanje
Izikhokelo zoSetyenziso lweeKhamera eziLawula uMzimba
Ukusetyenziswa kweekhamera ezenziwa ngomzimba ziiNkampani